Jawaari oo ka codsaday Raysulwasaare Khayre in uu dib u eegis ku sameeyo golaha wasiiradda uu dhawaan soo dhisay - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaJawaari oo ka codsaday Raysulwasaare Khayre in uu dib u eegis ku sameeyo golaha wasiiradda uu dhawaan soo dhisay
Guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Cusmaan Jawaari. [Sawirka: Archive]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Cusmaan Jawaari ayaa ka codsaday raysulwasaaraha cusub in uu dib u eegis ku sameeyo golihiisa wasiiradda oo uu dhawaan soo dhisay kadib markii ku dhawaad 100 xildhibaan ay soo jeediyeen codsi ku saabsan wax ka bedel.
Soo-jeedinta shalay oo Sabti ahayd kasoo baxday Jawaari ayaa digniin u noqon karta in liiska wasiiradda ee raysulwasaaruhu soo dhisay ay diidmo kala kulmi karaan golaha baarlamaanka.
Jawaari ayaa ku andacooday in soo doorashada golaha wasiiradda ay kasoo horjeedo waxa uu ugu yeeray awood qaybsiga qabiilka ee Soomaaliya.
Raysulwasaare Xasan Cali Khayre ayaa bilowgii asbuucii lasoo dhaafay ku dhawaaqay golaha wasiiraddiisa.
Golaha wasiiradda cusub ayaa la filayay in asbuucaan la hor-geeyo xildhibaanada baarlamaanka si ay ugu qaadaan codka kalsoonida ah.